ग्राण्ड फिनालेमा उपस्थित हुदै श्रृंखला र सदिक्षा - Experience Best News from Nepal
ग्राण्ड फिनालेमा उपस्थित हुदै श्रृंखला र सदिक्षा
अघिल्लो बर्ष सफल रुपमा सम्पन्न भएको ‘मिस नेपाल नर्थ अमेरिका’ को दोस्रो संस्करण सुरु हुन अब धेरै समय बाँकी छैन । आयोजक अहिले कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि विभिन्न तयारी गरिरहेको छ ।
यसै सन्र्दभमा मिस नेपाल २०१८ श्रृंखला खतिवडा ग्राण्ड फिनालेमा उपस्थित हुने भएकी छिन् । आयोजकमध्येका एक निराकर उप्रेतीले अगस्ट १७ मा हुन गैरहेको उक्त कार्यक्रममा श्रृंखलालाई आधिकारिक रुपमा निमन्त्रणा गरिएको बताए । त्यस्तै मिस नेपाल २०१० सदिक्षा श्रेष्ठ कोरियोग्राफरको रुपमा नियुक्त भएको समेत उनले बताए ।
विकिनी र पूलमा मस्त र ब्यस्त रहने प्रियंकाको रोजाईमा गर्मि र जाडोको प्रभाव !!
यी सुन्दर नायिका स्तन शल्यक्रियापछि झन् सुन्दर (हेर्नुहोस् तस्विरहरु)
अदितिको बोल्डनेस ! (हेर्नुहोस् तस्बिरहरु)
३ तस्बिरमा हट प्रियंका रुस्लान फेशन क्यालेन्डरमा अर्धनग्न फोटो पदर्शन गर्दै प्रियंका कार्की
यति हट नायिका जसलाई सरकारले नै लगायो प्रतिबन्ध !!